မကြာခဏဇက်ကို တဂျွတ်ဂျွတ်မြည်အောင် ချိုးတတ်သူများသတိပြု ဆင်ခြင်ဖွယ်.. - CeleLove
June 11, 2019 Cele Love ကျမ္မာရေးဆိုင်ရာ 0
အလုပ်လုပ်နေရသူတွေ၊ တစ်နေကုန် စာထိုင်ရေးနေရသူတွေ က များသောအားဖြင့်ဇက်ချိုးတာကို လုပ်တတ်ကြတယ်။ အညောင်းပြေအညာပြေ လို့သဘောထားကြတာမို့လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။
အခုတော့ အဲ့ဒီလို အညောင်းအညာပြေဇက်အချိုးကောင်းပြီး ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့ရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပြောချင်လို့ပါ။ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း သူမရဲ့အဖြစ်ကို ဒီဆောင်းပါးကနေ သင်ခန်းစာယူနိုင်ကြဖို့ သတိပေးလိုပါတယ်။ နာတာလီခူနီကီ လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးဟာ လန်ဒန်မြို့က ပရိုက်ဗိတ်ဆေးရုံကြီးတစ်ရုံရဲ့ လူနာတင်အရေးပေါ်ဌာနမှာ အလုပ်လုပ်နေတာပါ …။
တစ်ရက်မှာတော့ သူမနဲ့သူမသူငယ်ချင်းက အိမ်မှာ နေရင်းတီဗွီကြည့်နေကြတယ်။ ကြည့်နေရင်း နာတာလီ က ဘာရယ်တော့မဟုတ် သူမရဲ့ဇက်ကို ရုတ်တရက်ချိုးလိုက်တယ်။ တီဗွီကြည့်ရင်း အညောင်းမိလာလို့နေမှာပါ။ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက်ချိုးလိုက်တဲ့အသံက အရင်အခေါက်တွေထက် တော်တော်ကျယ်တယ်။ အဲ့ဒါကို သူမလည်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲ။ ပြီးတော့ သူမက သန့်စင်ခန်းသွားဖို့ထလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ နာတာလီ တစ်ယောက်မတ်တပ်မရပ်နိုင်တော့ပဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ပုံရက်သားလဲကျသွားပါတယ် …။
ကျောရိုးနဲ့ဆက်နေတဲ့ သွေးကြောမကြီးတစ်ခုလုံးပေါက်ထွက်သွားပြီး သွေးမလျှောက်နိုင်တော့ပဲ ဦးနှောက်ထဲမှာ သွေးခဲသွားတာပါ။ အကျိုးဆက်ကတော့ လေဖြတ်သွားခြင်းပါပဲ။ နာတာလီ အနေနဲ့ လမ်းလည်းမလျှောက်နိုင်တော့ပါဘူး။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ဆေးရုံရဲ့ကုသမှုတွေကို နာတာလီ တစ်ယောက်ခံယူနေသလို သူမဘဝကိုလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြန်လည်တည်ဆောက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့အခြေအနေဟာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့ သိပ်မသေချာသလို ပြန်ကောင်းလာခဲ့ရင်တောင် အချိန်တွေအကြာကြီးကြာပြီးမှ ပုံမှန်အနေအထားကိုပြန်ရောက်မှာပါ …။
ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့လည်း နာတာလီတစ်ယောက်ဘယ်လိုအချိန်ကျမှ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ကျိန်းသေပေါက်မပြောနိုင်တဲ့ အခြေအနေပါ …။
အဲ့တော့ အညောင်းမိပြီး ဇက်ချိုးတော့မယ်ဆိုတိုင်း နာတာလီ ရဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို သတိရဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အမှတ်တမဲ့တစ်ခုက တစ်ဘဝလုံးစာ နောင်တတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လား ???????
မကွာခဏဇကျကို တဂြှတျဂြှတျမွညျအောငျ ခြိုးတတျသူမြားသတိပွု ဆငျခွငျဖှယျ..
အလုပျလုပျနရေသူတှေ၊ တဈနကေုနျ စာထိုငျရေးနရေသူတှေ က မြားသောအားဖွငျ့ဇကျခြိုးတာကို လုပျတတျကွတယျ။ အညောငျးပွအေညာပွေ လို့သဘောထားကွတာမို့လို့ပဲ ဖွဈပါတယျ …။
အခုတော့ အဲ့ဒီလို အညောငျးအညာပွဇေကျအခြိုးကောငျးပွီး ဘဝတဈခုလုံးပွောငျးလဲသှားခဲ့ရတဲ့ မိနျးကလေးတဈယောကျအကွောငျးပွောခငျြလို့ပါ။ ကနျြတဲ့သူတှလေညျး သူမရဲ့အဖွဈကို ဒီဆောငျးပါးကနေ သငျခနျးစာယူနိုငျကွဖို့ သတိပေးလိုပါတယျ။ နာတာလီခူနီကီ လို့ချေါတဲ့ မိနျးကလေးဟာ လနျဒနျမွို့က ပရိုကျဗိတျဆေးရုံကွီးတဈရုံရဲ့ လူနာတငျအရေးပျေါဌာနမှာ အလုပျလုပျနတောပါ …။
တဈရကျမှာတော့ သူမနဲ့သူမသူငယျခငျြးက အိမျမှာ နရေငျးတီဗှီကွညျ့နကွေတယျ။ ကွညျ့နရေငျး နာတာလီ က ဘာရယျတော့မဟုတျ သူမရဲ့ဇကျကို ရုတျတရကျခြိုးလိုကျတယျ။ တီဗှီကွညျ့ရငျး အညောငျးမိလာလို့နမှောပါ။ဒါပမေယျ့ ဒီတဈခေါကျခြိုးလိုကျတဲ့အသံက အရငျအခေါကျတှထေကျ တျောတျောကယျြတယျ။ အဲ့ဒါကို သူမလညျးသိတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမှုမဲ့အမှတျမဲ့ပဲ။ ပွီးတော့ သူမက သနျ့စငျခနျးသှားဖို့ထလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ နာတာလီ တဈယောကျမတျတပျမရပျနိုငျတော့ပဲ ကွမျးပွငျပျေါကို ပုံရကျသားလဲကသြှားပါတယျ …။
ကြောရိုးနဲ့ဆကျနတေဲ့ သှေးကွောမကွီးတဈခုလုံးပေါကျထှကျသှားပွီး သှေးမလြှောကျနိုငျတော့ပဲ ဦးနှောကျထဲမှာ သှေးခဲသှားတာပါ။ အကြိုးဆကျကတော့ လဖွေတျသှားခွငျးပါပဲ။ နာတာလီ အနနေဲ့ လမျးလညျးမလြှောကျနိုငျတော့ပါဘူး။ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ ဆေးရုံရဲ့ကုသမှုတှကေို နာတာလီ တဈယောကျခံယူနသေလို သူမဘဝကိုလညျး အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ ပွနျလညျတညျဆောကျနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူမရဲ့အခွအေနဟော ပုံမှနျပွနျဖွဈဖို့ သိပျမသခြောသလို ပွနျကောငျးလာခဲ့ရငျတောငျ အခြိနျတှအေကွာကွီးကွာပွီးမှ ပုံမှနျအနအေထားကိုပွနျရောကျမှာပါ …။
ဆရာဝနျတှအေနနေဲ့လညျး နာတာလီတဈယောကျဘယျလိုအခြိနျကမြှ ပုံမှနျပွနျဖွဈမလဲ ဆိုတာ ကြိနျးသပေေါကျမပွောနိုငျတဲ့ အခွအေနပေါ …။
အဲ့တော့ အညောငျးမိပွီး ဇကျခြိုးတော့မယျဆိုတိုငျး နာတာလီ ရဲ့ ဖွဈရပျကို သတိရဖို့လိုပါတယျ။ တဈခါတဈလေ အမှတျတမဲ့တဈခုက တဈဘဝလုံးစာ နောငျတတှဖွေဈသှားနိုငျတယျမဟုတျလား ???????